porn ကိုအစဉ်အမြဲငါ့ကိုအတိုင်ခဲ့သလား (Salon.com) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ကျွန်မရဲ့အရွယ်ကတခြားယောက်ျားလေးတွေလိုပဲကျွန်တော်ဟာ smut ကိုအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ရခဲ့တယ်။ အသက် ၂၃ နှစ်မှာငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမလား
By ဣဇာက်သည်အာဗေလ, တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီ 13, 2013
ဒါဟာ Kazaa ၏ခေတ်ကြီးနှင့်အငါတို့သည်နောက်ပိုကောင်းသိတယ်။ ငါ၏အငါ၏အခြိုးခြံခြွေပုဂ္ဂလိကမူလတန်းကျောင်းတွင်အထီးသူငယ်ချင်းအုပ်စုစောင့်ကြည့်, ဆွေးနွေးခြင်းများနှင့်ပင်ညစ်ညမ်းမျှဝေများထဲတွင်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထွက်ပေါက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒေါင်းလုပ်ဒလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူကျွန်တော် CD များကိုမီးရှို့မယ်လို့နှင့် (Will Smith ရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းလည်း "နဲ့ Big ဝီလီစတိုင်" ကဲ့သို့) အမရေလိင်တံကိုကိုးကားနှင့်အတူအချို့သောအယ်လ်ဘမ်မှယူ "လိမ္မာပါးနပ်" ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူကျောင်းကသူတို့ကိုဖလှယ်။ ဒါကလမ်း, ငါတို့သည်ကွင်းဆင်းအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမေးမြန်းခြင်း, အများပြည်သူအတွက်ညစ်ညမ်းအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ကြောင်း "သင်အသစ် Craig ဒါဝိဒ်သည် CD ကိုဘယျလိုထင်ခဲ့ဘူးငါသည်သင်တို့အဘို့မီးရှို့ပစ်?"
အခြားကျောင်းသားများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်ရအမှန်တကယ်ဂီတအယ်လ်ဘမ်ကိုဝယ်ယူသည့်အခါအဆိုပါ "အထဲမှာဟာသ" ဘေးဥပဒ်ကိုအလယ်တန်းကျောင်းရုပ်ပြပါရမီမှထ။ ဒါဟာသူတို့အ CD များပေါ်တွင်ရုပ်ပုံများကို ပို. ကုန်ကြမ်းရိုးရာ Playboy pin ကို-Up ထက်ခဲ့ မှလွဲ. ပုံမှန်ဆယ်ကျော်သက် hijink ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကြှနျတေျာ့မိဘများ၏နှစ်ဦးစလုံးကျုံ့ ရှိ. , ငါသည်ငါ့အိမ်သူအိမ်သားအတွက်လိင်အကြောင်းပြောနေတာယေဘုယျအားဖြင့်အဆင်ပြေခဲ့သော်လည်း, porn - ငါစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်း - ရုံမညီကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုရှင်းပြခဲ့အဖြစ်လိင်၏အယူအဆမှကွာရှင်းနားမလည်နိုင်လောက်အောင်စုစုပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ လိင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့လိင်အင်္ဂါသို့မိမိအလိင်တံထည့်သူတစ်ဦးလျှင်, ဘယ်လိုရှမ်ပိန်မျက်မှန်ထဲက cum သောက်သုံးမိန်းကလေးငယ်များကြောင်းရုပ်ပုံသို့ fit ခဲ့တာလဲ သောကြောင့်ယင်း၏ ပြော. သဘောသဘာဝ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း inextricably ဖမ်းမိထားကြောင်းများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေဖြစ်လာခဲ့သည်။
အိမ်သူအိမ်သားမှောင်မိုက်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ကငါမိသားစုကွန်ပျူတာမှအောက်ထပ်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်မယ်။ , ZIP ဆွဲထုတ်ကာဆင်ခြေနှင့်အတူပြေး - ငါဆုံလည်ကုလားထိုင်၏ polyester-ဝါဂွမ်းထိုင်ခုံသို့အခြေချကာဘရောက်ဇာကိုဖွင့်လှစ်မယ်လို့အမျှငါ့နှလုံးစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အရှကျကှဲရောနှောနှင့်အတူ thump မယ်လို့, ငါ့နားရွက်ကိုငါ့မစ်ရှင်ဖျက်သိမ်းမဆိုအကြောင်းပြချက် perked မနက်ဖြန်များအတွက်ရာသီဥတုစစ်ဆေးနေအကြောင်းကိုအဆင်သင့်။ (တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တစ်ခုဆင်ခြေ။ ငါသပ်ရပ်ဆိခဲ့ပါတယ်) ။ ဗီဒီယို stream စတင်တစ်ချိန်ကကြောက်မက်ဘွယ်သောအခြင်းနှင့်ဒုစရိုက်ဖြေသာတပ်မက်သောစိတ်နှင့်အတူအသီးသီးတွင်မည်ဖြစ်သည်။ မကြာမီငါ၏အ primal ဦးနှောက်ထဲမှာလျော့ကျမဟုတ်ကြောင်းထားတဲ့အသင်းအဖွဲ့ - ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးတစ်ဦးက high-လောင်းကြေး heist ထားတဲ့စှဲလမျးသူရဲ့မြင့်မားတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်မအဖြစ်ထင်ရှားစွာငါ ejaculated ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သတိရပါ။ တောင်မှပြန်ပြီးတော့ weirdly Insidious ခံစားခဲ့ရ - တစ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မျက်နှာပြင်၏အနာဂတ်ယုတျညံ့သညျ့နှင့်အတူစွန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးအပြစ်မဲ့, exuberant နီးပါးရှေးခေတ်အခိုက်။ ကျွန်မမိသားစုကကွန်ပျူတာမှာကုလားထိုင်မှထခုန်ထွက်နှင့်ရေချိုးခန်းမှအပေါ်ထပ်ကာရံထားခြင်းခံရသည်။ ငါယခု, ငါ့မှေးဖှားနိုငျ proclivities ဖြည့်ဆည်း, ငါ့လက်မောင်းကြီးပြင်းခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှကျယ်လောင်သောထွက်ဆိုပါတယ်နိုင်ကြောင်းအမှန်တကယ်ဂုဏ်ယူ, မှန်သို့ကြည့်ရှု "ကျွန်မနေတဲ့အဖေဖြစ်နိုင်တယ်။ "
ငါ 13 တုန်းကကျနော်တို့ကွန်ပျူတာအခန်းတစ်ခန်းတံခါးကိုအပေါ်တစ်ဦးသော့ခတ်နဲ့အိမ်အသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ငါနေဆဲသတိထားခဲ့ပေမယ့်ငါသော့ခတ်များရှိတံခါးလက်ကိုင် jiggling တစ်စုံတစ်ဦး၏ကလစ် နှိပ်. ကြားလျှင်အကြိမ်အနည်းငယ်ငါသည်ငါ့ဘောင်းဘီကဆင်းခဲ့ရပါတယ်။
ကျနော်တို့သမိုင်း check လုပ်ထားနှင့်ပေါ်မှာညစ်ညမ်းဆိုဒ်များရှိခဲ့သည်။
ဒါဟာအများအပြားမိဘများနှင့်ကလေးများလူသိများကြပြီဟာသောင်မတင်ပါပဲ။ ဒါဟာအကြောသေမယ့်, ကရှက်စရာင့်မယ့် - အဘယ်သူမျှမဘာဖြစ်လို့ရှေ့ဆက်ဖို့ဘယ်လိုသို့မဟုတ်အတိအကျသိတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုငါ porn စောင့်ကြည့်ခဲ့ဝန်ခံချင်အဘယ်သို့နည်း ကြောင်းအဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း? ငါသည်ဤရှက်ကြောက်လို့ယူဆတယ်လား သငျသညျအကြှနျုပျကိုရပ်တန့်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါသလား ငါသိလူတိုင်းသည်ဤလုပ်နေတယ်!
youporn.com သို့မဟုတ် redtube.com သို့မဟုတ်အခြားညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုလှန်လှောကြည့်ရှုသူများမှာထိုတည်ဆောက်မှုကိုသိကြသည်။ Sidebar တွင်ရင့်ကျက်သော၊ Hentai၊ S&M၊ လူဆိုးဂိုဏ်း၊ အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီတွင်ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများရှိသည် ((သို့သော် c'mon၊ ဗွီဒီယိုများရှိသည့်အချိန်တွင်မည်သူသည်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုမည်နည်း))၊ အင်တာနက်အမြန်နှုန်းအလုံအလောက်ရှိခြင်းဖြင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဗွီဒီယို၏အပိုင်းကိုကျော်သွားပြီးအခြားတစ်ခုကိုသွားနိုင်သည်။
လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုထောက်ခံနမ်း * * * cum ရိုက်ချက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ * ကို click * ထိုးနှက်အလုပ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ * threesome * ကို click * orgy
သည်ပဓာနအတွေးမကြာခဏပဲဖြစ်ပါတယ်အခါအမည်မသိ, အမွငျ "ကိုပိုမို!" - တစ်ခုသာမရေအရှက်ကွဲခြင်းအားဖြင့် inhibited တစ်ဆယ်ကျော်သက်လိင် drive ကိုနှင့်အတူ, ငါသည်အလျင်အမြန်a"ကို kink လိမ်။ " ပြပ်ဝပ်အားလုံးပြီးနောက်ကျွန်တော်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိအကြောင်းပြောနေတာဖွင့် ငါ့ထံသို့ sexy ခဲ့, ငါသန်စွမ်းအတူအသစ်အဆန်းကိုလိုက်ကြ၏။
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်လျင်မြန်စွာအွန်လိုင်းပုံရိပ်တွေမှ desensitized တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦး threesome kinky ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကခဲ့လျှင်, ငါသညျဤရက်သတ္တပတ်တစ်ခုခု Wilder လိုအပ်ပါတယ်ချင်ပါတယ်။ အထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိစေရန်, ငါအရှက်ကွဲစေခြင်းနှင့်တပ်မက်၏ထိုအဆိပ်အတောက်ရောနှောရှာတွေ့ခဲ့ရသည်။
အထက်တန်းကျောင်း၌ငါ့ဒုတိယနှစ်အားဖြင့်သာငါစုတ်ခံစားရတယ်။ ငါအရှိဆုံးယောက်ျားတွေငါ၏အအသက်အရွယ်ပုံမှန်အစည်းအဝေး porn စောင့်ကြည့်ခဲ့မျှမျှတတအချို့ဖြစ်ခဲ့သည်သော်လည်းငါစောင့်ကြည့်ခဲ့ porn အမျိုးအစား (psychotherapists တည်းဟူသောသားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမျှဝေဖို့စိတ်အားထက်သန်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုခု) အကြောင်းကိုရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခံစားရတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းထဲမှာကျနော်တို့က "Scarlet ပေးစာ" ကိုဖတျရှုခဲ့ကြနှင့်ဆရာကျွန်တော်မည်သူမဆိုသိလိုဘယ်တော့မှမယ်လို့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုချရေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသို့ပြောသည်။ ငါ "ငါသည်ကာတွန်း porn စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ " (တကယ်တော့ငါကုဒ်ထဲမှာရေးသားခဲ့သည်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိဤမျှထိတ်လန့်ခဲ့), ကိုဆင်း scribbled ။ ထိုအခါငါရှိခဲ့ပါတယ်။ နှင့် MILF porn ။ နှင့် "bukkake ။ " ထိုအခါမုဒိမ်းမှု။ ထိုလူအပေါင်းတို့ငါအမှန်တကယ်အသက်တာ၌လုပ်နေတာ၏အိပ်မက်မြင်ပြီမဟုတ်ကြောင်းအရာအမူအကျင့် - ကိုယ်ကျင့်တရားအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သေချာပေမယ့်လည်းသူကပင်သေချာပေါက်မှန်ကန်အသက်တာ၌ဤအမှုအရာတို့ကိုလုပ်ဖို့အကြှနျုပျကိုလှည့်မဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းမူကား, သို့သော်လည်းငါသည်ထိုသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြ, ငါရှက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ ငါဖြစ်သို့မဟုတ်မဖြစ်သင့်ပါလျှင်သေချာမဟုတ်ခဲ့ပေ။
တဦးတည်းအရာအဘို့, ငါဘယ်သူ့ကိုမှနာကျင်မခံခဲ့ရပါဘူး။ နှင့်အခြားအဘို့, ဤဆိုဒ်များထရှိကြောင်းညစ်ညမ်းထား! သူတို့ကလက်ျာဘက်, လူများကစောင့်ကြည့်ဖို့လိုခငျြလို့လုပ်နေတာရမညျနညျး ငါကမျှော်လင့်အိပ်မက်မက်ခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်လူကြိုက်များဝယ်လိုအားတို့ကအဲဒီမှာဘာ၏အမျိုးအစားမှတဆင့်ကလစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ခွင့်ပုံမှန်ရခဲ့သလဲ က OK ကိုလုပ်ခဲ့သလား
ဤမေးခွန်းများကိုငါ့ကိုနှောင့်အယှက်မှဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ငါကိုမှန်ကန်မိန်းကလေးများအကြှနျုပျအဘို့ထိုသို့ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အထက်တန်းကျောင်း၌ငါ့အကြီးတန်းနှစ်ကကျွန်မဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အေးကြက်ဆင်။ ငါးလသည်။ ငါတကယ်မှာအားလုံး masturbate ဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်, ငါအနည်းငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာလန်းဆန်းခဲ့, ငါကျိန်းသေပိုမိုလွယ်ကူစွာ "ရိုးရာ" အမှုအရာအားဖြင့်ဖွင်ဖြစ်လာခဲ့သည် - ငါ့ကိုလှည့်ပတ်မိန်းမများအပါအဝငျ။
ကျွန်မလိင်ဆက်ဆံစတင်သောအခါမူကား, ငါညစ်ညမ်းအပေါ်မှာငါ့သပိတ်မှောက်တက်စောင့်ရှောက်ဖို့ဝေးငါဆက် (နှင့်နေဆဲဆက်လက်) ဖူးသော်လည်း, ကိုယ့်ကိုကိုယ်စင်ကြယ်စေခြင်းမှရှိခဲ့ပါတယ်သဘောပေါက်လာတယ်။ ငါဒုက္ခငါတို့နှင့်အိပ်ပျော်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးသုံးဦးနှင့်အတူတစ်စိုက်ထူရတဲ့နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကသေးငယ်တဲ့ကိစ္စနဲ့တူမခံစားရဘူး။ လူအပေါင်းတို့သည် schoolyard ဂျော်ကီနောက်ဆုံးမှာ phallic အာဏာကြောင့်ယခုအချိန်တွင်ဆင်း လာ. , ကိုယ့်ကြောင့်မလုပ်ဆောင်နိုင်လိုပုံရသည်။ ငါကပိုမှန်ကန်အမျိုးသမီးထက်ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်ဖွင်ခဲ့သလား ငါ့လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
ကျွန်မမှန်မှန်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးနှင့်အချို့အရက်၏မြစ်ဆုံ, ပေါင်းပင်မရှိကွန်ဒုံးများနှင့်ယုံကြည်မှု, နှစ်သိမ့်ကိုမြင်လျှင် စတင်. , ငါသူမ၏နှင့်အတူခံစားခဲ့ရချစ်ခင်ငါ့ကိုလိင်ခံစားစတင်ရန်ခွင့်ပြု - တစ်ခုအတိုင်းအတာအထိ။ ငါကအသိအမှတျပွုမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်ည၏အများစုငါယစ်မူးခဲ့သည် "ကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှု" ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှင့်အညီ, ပိုဆိုးမယ့်အရာကိုငါလိင်စဉ်အတွင်း porn နှင့် ပတ်သက်. ကူးယဉျခဲ့သည်။
ဒါဟာငါတကယ်ဂရုစိုက်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်ကြှနျုပျမကျြစိကိုပိတ်လိုက်ခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံစိတ်ကူးသို့မဟုတ်ငါတောင်မှထို့နောက်ရှက်သောငါ၏လူငယ်၏မော်ကွန်းတိုက်နေ deviant ဗီဒီယိုကိုမှတ်မိဖို့ dissociative, alienating နီးပါးလူမဆနျတာဝန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါသည်ဤကြုံတွေ့င့်တဲ့သူကအခြားနှစ်တစ်ထောင်ယောက်ျားနှင့်ပြောဆိုသောပါတယ်, အဲဒါကအထူးသဖြင့်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲအရှိဆုံးဝတ္ထု, deviant, kinky င်ဒါနောကျဆုံးမြင်ကွင်းတစ်ခုမှနောကျဆုံးမြင်ကွင်းတစ်ခုကနေခုန်ကျော်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်ရသည် - ငါတို့သည်လိင်ဆက်ဆံမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကြောလမ်းကြောင်းတစ်နှိုငျးမဲ့ overstimulation တောင်းဆိုတစ်ခုစွဲလမ်း, တိုးတက်သောကောက်နှင့်အတူသုတ်ရည်လွှတ်ဆက်စပ်ရှိခြင်းခံခဲ့ရမတိုင်မီတစ်ဦးကဆယ်စုနှစ်။
ငါ porn (ငါပထမဦးဆုံး ejaculated ခဲ့သောမီကပင် porn စောင့်ကြည့်ခဲ့) စောင့်ကြည့်ထံမှဖြစ်ချင်သင်ယူနေသောကြောင့်ထို့အပွငျ, ငါသည်ပင် voyeuristic ဒြပ်စင်ခြင်းမရှိဘဲတစ်အော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိခဲ့ဘူး - ငါ့အကိုယ်ထင်ရှားအာရုံသို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့တူးဖော်ရေးမှတဆင့် ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက် conjured ကြောင်းရငျးနှီး၏။ ငါ - ငါကဒီမှာတစ်ဦးတည်းမထင်ပါဘူး - သူတွေကိုဆိုဒ်များထောက်ပံ့သောတိကျတဲ့ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူသုတ်ရည်လွှတ်၏ခံစားချက်တွဲအင်တာနက်ညစ်ညမ်းများ၏အကူအညီဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအေးစက်။ ထိုအပင်နှစ်အကြာမှာသူတို့ကိုငါမပါဘဲဖြစ်ချင်ပါဘူး။
ရုပ်တုဆင်းတုကိုငါ့ဦးနှောက်သို့ seared ခဲ့ကြသည်ကတည်းကဤသင်တန်း၏, cumming မှငါ့ကိုကိုရပ်တန့်ဘဲနေ၏။ ငါနေဆဲအတိအကျငါခြောက်လသို့မဟုတ်ခုနစ်နှစ်များအတွက်စောင့်ကြည့်ကြပြီမဟုတ်သောဗီဒီယိုမှတ်မိနိုင်ပါတယ်။
အခုတောင်မှငါ့ "စိတ်ကူးယဉ်" မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ငါ့ 14 နှစ်အရွယ်မိမိကိုယ်ကို၏စိတ်ကူးယဉ်အတွက်အမြစ်တွယ်နေကြသည်။ လိင်၌အသက်အရွယ်ကွာဟမှု? မုဒိမ်းမှုလား၊ ဤရွေ့ကားအာဏာနှင့်လွှမ်းမိုးမှု၏စိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော (သို့မဟုတ်မကောင်းသော) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုက်နှစ်သက်မှုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်မရင့်ကျက်သေးသောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းငါအစဉ်အမြဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတ warped ခဲ့ကွောငျးစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါကငါ့ဦးခေါင်းအတွက်ကွင်းဆက်အပေါ်ကစားခြင်းရဲ့လျှင်, ဆိုလို, အစဉ်အမြဲငါတကယ် porn "စောင့်ကြည့်" ရပ်တန့်နိုင်သလဲ
ဒါဟာပိုကောင်းလာတာတော့ရှိပါတယ်။ ငါတော်တော်များများရေရှည်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့အချို့ Foucault ဖတ်ပါနှင့်ပင် kinkier လိင်နှင့်အတူနည်းနည်းစမ်းသပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုအများဆုံးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဖြင့်ပိုမိုအပြုသဘောဆောင်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ကြသူမိတ်ဆွေများကိုအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများ, စကားပြောခဲ့ပါသည်ကူညီပေးခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတစ်သူမကမုဒိမ်းကျင့်စိတ်ကူးယဉ်ရှိသည်ဖို့အသုံးပြုသူမက "အလှတရား" ရှိမရှိတစ် Sculpt ခန္ဓာကိုယ်ဒါမှမဟုတ်ပွင့်လင်းသောလယ်များကဖွင့်ခံရဖို့နည်းလမ်းတွေရှာတွေ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှတဆင့်ဒါကြောင့်အကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားမဟုတ်ခဲ့ပုံကိုရှင်းပြသည်။ အလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်ကနေ masturbating ခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးရှုပ်ထွေးအတွက်လာမယ့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုမှနှိုးထကဲ့သို့ညစ်ညမ်းသူမတစ်ဦး voyeuristic လမ်းအတွက် fantasized ဘယ်တော့မှကြောင်းပြောတယ်, ဒါပေမယ့်အစားသူမ၏နှိုးဆော်ခြင်းတစ်ဦးအထူးသဖြင့် setting ကိုသို့မဟုတ်ခံစားချက်မှတ်မိမယ်လို့စောင့်ကြည့်ဘယ်တော့မှခဲ့သူနောက်ထပ်မိတ်ဆွေတစ် စာရွက်များ။
ငါ၏အလူမှုရေးလိင်နားမလည် - အခုတော့ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက် reprogram ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ သို့သော်အလွန်ရှုပ်ထွေးငါ့ကိုထွက်ခွာသွားပါတယ်။ ငါတကယ်ကိုဘာလုပ်ရမှန်းကြိုးစားနေပါ၏, ဆိုလိုပါသလော ကြှနျတေျာ့ "သဘာဝ" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိ? sexy အစဉ်အမြဲဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် - သူကအဆီနှင့်အဖျော့ဖြစ်စံချိန်စံညွှန်းပူဖြစ်ဖို့အသုံးပြု! တကယ်ငါရှာကြံတယ်သောလူမှုရေး, porn-မှုတ်သွင်း sexy ဖို့အခြားရွေးချယ်စရာကဘာလဲ?
ငါ့ကိုအကောင်းခံစားအကြောင်းကိုအကောင်းခံစားမိချင်အဆုံး၌ထင် - arousal ထိန်းချုပ်သောငါ၏ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အရှက်ကွဲ, အပြစ်ရှိတယ်နှင့်စွဲလမ်းကောက်ဖယ်ရှားရန်။ ငါ kinky လိင်အံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်ထင်; ဒါကြောင့်အရှက်ကွဲခြင်း, လွှမ်းမိုးမှုကိုနှင့်လိုက်တယ်အမှန်တကယ်လိင် pervade ဘယ်လိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ အဲဒါကိုနုတ်ထွက်မရ - ဒါပေမယ့်ငါ kink စူးစမ်းလေ့လာနိုငျရနျအလိုရှိ၏။ ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်မှုကိုငါ့မျိုးဆက်ရဲ့ထွေးပိုက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီပိုလှောင်အိမ်နဲ့တူခံစားရ၏။
ကမယ့်တခြားတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့နဲ့တူငါ, ငါ၏လိင်ကနေရိုင်းစိုင်းခံစားရတယ်။ ငါသည်ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများပြန်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ porno အတိတ်၏နတ်ဆိုးတို့၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေါ်ပြောင်းလဲခြင်းကုထုံးဖျော်ဖြေဖို့ကြိုးစားနေမဟုတ်ပါဘူး။ ငါနောက်ကျော 2002 သွားပြီးကွန်ပျူတာကိုပယ်ရှားခြင်းနှင့်ရိုးသားကာမဂုဏ်တူးဖော်ရေးမှတဆင့်ကောင်းသောခံစားရသောအရာကိုထုတ်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။
ငါရေချိုးကန်၌အိပ်နှင့်ငါ့ပေါင်ဝန်းကျင်ပူနွေးသောရေမြင့်တက်လာကြကုန်အံ့။ သူတို့အာရုံစူးစိုက်မှုကို၏ဗဟိုအနေကိုသိသကဲ့သို့ငါ၏ထိတွေ့အစိတ်အပိုင်းများ, အထောက်တွေ့ရှိခံစားကြရသည်။ ငါသည်ငါ့မျက်စိနှင့်ထိတွေ့ပိတ်ပါ။ ရင်ဘတ်, အစာအိမ်, တင်ပါး - ဆံပင်, လည်ပင်း, ပခုံး။ ငါသည်ငါ့လိင်တံရပြီးတာနဲ့ sensitivity ကိုအတွက်ကွာဟမှုတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီအစားစိတ်ကူးယဉ်သိမ်းထားသော, ဒါမှမဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိချွတ်ရဖို့သူတို့အပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်ခြင်းထက်, ငါတို့ထိ mesmerized ခံရဖို့ငါ့အကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး - ငါသာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်သော်လည်းအဖြစ်။
ငါ "ရှက်စရာ" သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းဘာမှစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲပိတ်ထားရနိုင်ပေမယ့်သလောက်ပျော်စရာမဟုတ်ဘူး - ဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ကောင်းသောခံစားရပါဘူး။ ငါ sexy ကိုရှာဖွေဘယ်တော့မှတစ်စုံတစ်ဦးကို fuck ဆိုတဲ့သကဲ့သို့ငါပဲ, ငါ၏ဦးခေါင်း၌လုံးနှင့်သံကြိုးနှင့်အတူ MILF replaying ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နုတ်ထွက်သငျ့သလော ဒီတစ်ခါလည်းငါချစ်နိုင်မည်တစ် cougar သို့မဟုတ်ခိုငျအခန်းကဏ္ဍ-play နိုင်သူတစ်ဦးမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေနိုင်သလဲ ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုယ်ရှာဖွေစူးစမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် XXX ကဗီဒီယိုများ၏ညစ်ညမ်းမှုတဖြည်းဖြည်းပိုပြီးအိပ်မက်ကဲ့သို့, ဘာဝနာ, ပစ္စုပ္ပန်, fleshy အသက်ရှင်လျှက်စိတ်ပြည်နယ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထုတ်ဖေါ်ဖို့ငါ့အ masturbatory စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှရှင်းလင်းရေးမျှော်လင့်သင့်သလဲ
* ကိုကလစ်နှိပ်ပါ *